Minista Minista Canada John Diefenbaker
Diefenbaker bụ onye na-agbapụta ndị omempụ na ọkà okwu a ma ama
John G. Diefenbaker, bụ onye na-anụ ụtọ egwuregwu na egwuregwu, bụ onye Canada na-agbapụ aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nsogbu ikpe ziri ezi. Ndi Diefenbaker abughi French ma o bu Bekee, ha gbaliri ike itinye ndi ozo nke Canada. Diefenbaker nyere ndịda ọdịda anyanwụ Canada ihe dị elu, ma ndị Quebec na-ele ya anya dịka enweghị ọmịiko.
John Diefenbaker nwere ihe ịga nke ọma n'ihu ụwa.
Ọ kwadoro ikike ụmụ mmadụ na-achị ụwa, ma usoro ịgbagha mgbagwoju anya na agbachitere akụ na ụba na-akpata ọgba aghara na United States.
Ọmụmụ na Ọnwụ
A mụrụ ya na ndị nne na nna German na Scottish na Sept. 18, 1895 na Neustadt, Ontario, ndị nne na nna nke German na Scottish, na 1903 na Saskatoon, Saskatchewan, n'afọ 1910. Ọ nwụrụ na Aug. 16, 1979, na Ottawa, Ontario.
Diefenbaker nwetara akara ugo mmụta nke Bachelor si Mahadum Saskatchewan na 1915 na onye ọkà mmụta na sayensị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na akụnụba na 1916. Mgbe ndị agha nwụchara, Diefenbaker laghachiri na Mahadum Saskatchewan ka ọ mụọ iwu, na-agụ akwụkwọ na LL.B. na 1919.
Mgbe ọ nwetasịrị akara mmụta iwu, Diefenbaker guzobere iwu na Wakaw, dị nso na Prince Albert. Ọ rụrụ ọrụ dịka onye ọka iwu na-agbachitere maka afọ 20. N'ime ihe ndị ọzọ ọ rụpụtara, ọ gbachiteere ndị ikom 18 site na ọnwụ ọnwụ.
Òtù ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nkwụsị (Distrikti Distrikti)
Diefenbaker bụ onye so n'òtù Conservative Progressive. Ọ na-eje ozi n'Ọdọ Mmiri Centre site na 1940 rue 1953 na Prince Albert site n'afọ 1953 rue 1979.
Diefenbaker bụ praịm minista 13 nke Canada, malite na 1957 ruo 1963. Okwu ya gbasoro ọtụtụ afọ nke nchịkwa Liberal Party nke gọọmentị.
Tinyere ihe ndị ọzọ rụzuru, Diefenbaker họpụtara onye nlekọta ụlọ ọrụ Canada nke mbụ, bụ Ellen Fairclough, na 1957. O bu ụzọ kwuo na ịkọwapụta "Canada" ịgụnye ọ bụghị naanị ndị nke nnabata French na Bekee. N'okpuru ụkọchukwu ya, a nabatara ndị Aboriginal Canada ka ha jiri aka ha kwado votu maka oge mbụ, a họpụtakwara onye mbụ na Senate. Ọ chọtara ahịa na China maka ubi ọka wheat, kee Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọdịnaya nke Mba na 1963, gbasaa ụgwọ ezumike nká, ma wepụta nsụgharị nke otu na House of Commons.
Ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke John Diefenbaker
A họpụtara John Diefenbaker onye ndú nke Saskatchewan Conservative Party na 1936, ma ndị otu ahụ emerighị oche ọ bụla na nhoputa ndi ochichi nke 1938. A họpụtara ya mbụ na House of Commons Canada na 1940. Ka oge na-aga, a họpụtara Diefenbaker onye ndú nke Conservative Party nke Canada na 1956, ọ bụkwa onye ndú nke Opposition ahụ site n'afọ 1956 rue 1957.
N'afọ 1957, ndị Conservatives meriri n'ọchịchị ole na ole na nhoputa ndi ochichi niile na 1957, merie Louis St. Laurent na ndị isi obodo. A raara Diefenbaker nkwa dị ka praịm minista nke Canada na 1957. Na ọkwa ntuli aka n'ozuzu 1958, ndị Conservatives meriri ọtụtụ ndị ọchịchị.
Otú ọ dị, ndị Conservatives laghachiri n'ọchịchị ole na ole na nhoputa ndi ochichi 1962. Ndị Conservatives tụfuru ntuli aka 1963 na Diefenbaker ghọrọ onye ndú nke mmegide ahụ. Lester Pearson ghọrọ praịm minista.
Ditchenbaker nọchiri anya onye ndú nke Conservative Party nke Canada site na Robert Stanfield na 1967. Diefenbaker nọgidere bụrụ onye òtù nke nzuko omeiwu ruo ọnwa atọ tupu ya anwụọ n'afọ 1979.
Ọrụ nke ndị omeiwu Canada
Prime Minista John Turner
Nchekwa Ulo Ochie nke Kanada nke Canada (OAS)
Prime Minista Joe Clark
Origins nke Saskatchewan Province nke Canada
Ịghọta Nzuko omeiwu Canada
Winnipeg: Isi Obodo nke Manitoba, Obodo nke Ọzara
Ihe ngosi nke Michaëlle Jean
Ọnụ ego kacha nta na Canada
Mongol Siege nke Baghdad, 1258
Otu esi eji okwu French 'Tant Pis'
Percy Julian na Nchọpụta nke Cortisone nke Na-eme Ka Mma
Top 15 Albums kachasị mma nke mba
Ndepụta nke osisi ndị mebiri site na ịṅụ sịga mụbara
Ngalaba Na-ahụ Maka Admissions na Fullerton State California
20 Hilarious Album Covers mara mma
Nkwa Ndị Kraịst Agbamakwụkwọ
Akụkọ nke Ecuador
Gịnị Bụ Ronin?
Asụsụ nke okooko osisi - okooko osisi na ihe ha pụtara
Ebe nchekwa ala nke ndị agha na-enweghị ihe ọgbara ọhụrụ na Online
Gịnị Bụ Iwu Na-atụle?
Ihe Bible Kwuru Banyere Ime Ihe n'eziokwu na Eziokwu
Uru nke Ịmụ Latin
Otu esi ejikọta na eriri na-ezughị okè
Janet Lynn - Akụkọ Akụkọ Mmiri Ice Skating
Mmekọrịta nke United States na Mexico
Ihe mere ihe gbasara omenala ụlọ akwụkwọ na usoro iji meziwanye ya
Nchịkọta nke Mwakpo Dorian na Gris
Edward Craven Walker: Onye na-ere ihe n'apụ ọkụ
Banyere "Ndị na-agbaziri ego" site na Mary Norton
Ndị Na-agwọ Ọgwụgwọ